Haalli Koolu Galtoonni Daangaa Ameerikaa Itti Qabamanii Jiran Yaaddessaa Ta’uun Gabaasame
Hoogganaan dhimma qorannaa naga eegumsa keellaaleen koolu galtoonni daangaa kutaa Texas keessatti hidhamanii jiran humnaa ol namoonni kan keessatti heddummaatan jechuun erga himatanii torban tokko booda gabaasi haaraan ba’e immoo ijoollee koolu galtootaa keellaa Arizona keessa jiru keessatti dararaman ilaalcha akka argatan beeksisee jira.
Gabaasi caasaa oduu NBC jedhu akka gabaasetti ijooollee 30 kanneen seenaan isaanii angawoota dhimma isaanii ilaalan kanneen ministrii eegumsa fayyaa keessaan galmeessame, ijoolleen kun huccuu jalatti uffatan ququlqulluu gaafachuu illee angawoota mufachiisuu danda’a jedhanii sodaachuu isaanii mul’isa.
Gabaasi sun gurbaa tokko kan nyaati fi bishaan dhiyaateef akka hin taaneef ennaa dubbatan waardiyaaleen daangaa kan isaan afatanii ciisan jalaa fudhachuu dhaan simmintoo irra akka ciisan dirqsiisuu isaanii tuqee jira.
Ijoolleen hangi tokko bilbila akka hin fayyadamnee fi qaama isaanii akka hin dhiqanne dhorkamuu illee dubbataniiru. Gabaasi sun dubbi himaa dhaaba to’annaa daangaa maqaa dha’uun gochi kun guutummaan akka qoratamu beeksisee jira.